सम्बद्ध कार्यक्रम - ULIVE TV
प्रयोगकर्तालाई भिडियो च्याटमा ल्याएर कमाउनुहोस् वा यसलाई तपाईंको साइटमा थप्नुहोस्!
कुराकानीमा जानुहोस् अनुप्रयोग खोल्नुहोस् पञ्जीकरण लग - इन
U LIVE एक अन्तर्क्रियात्मक भिडियो च्याट हो
स्ट्रिमिंग द्वारा कमाउन चाहने दर्शकहरू र केटीहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सबै सीसाबाट अधिकतम लाभ लिन मद्दत गर्दछौं - सामग्री, लिलामी र मेल द्वारा प्रेरित गरी।
U LIVE दुबै पीसी र मोबाइल उपकरणहरूमा ब्राउजरहरूमा काम गर्दछ। तपाइँ पदोन्नति को लागी जुनै पनि यातायात प्रकार प्रयोग गर्नुहोस्।
बजार मा काम को
१ नेतृत्वबाट औसत आय
२०० डलर बाट
प्रति महिना एक संलग्न वेबमास्टर वा प्रसारकबाट
कार्यात्मक भुक्तान गर्नुहोस्
हाम्रो भिडियो च्याटमा धेरै निःशुल्क स्ट्रिमहरू छन्। यद्यपि सबै भन्दा ताजा सामग्री भुक्तानी पछि मात्र उपलब्ध हुन्छ।
निजी र सामान्य कलहरू
निजी कलहरू र भिडियो च्याटहरू प्रति मिनेट भुक्तान गरिन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूले गतिविधिहरूको लागि भुक्तानी गर्छन् जसले उनीहरूलाई केटी आफैलाई पानीले हाम फाल्न वा जम्प लगाउन अनुरोध गर्न सक्दछन्।
स्ट्रिम र सामग्री
तपाईं लोकप्रिय स्ट्रिमहरू, फोटो र भिडियोहरू हेर्नको लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ।
यहाँ पैसा कसरी कमाउने
हाम्रो पार्टनरहरू उनीहरूको सम्बद्ध प्रयोगकर्ताहरू द्वारा बनाईएको प्रत्येक खरीदबाट कमाउँछन्। साथै तपाईलाई सम्बद्ध वेम्बास्टर र प्रसारकहरूको लागि भुक्तानी हुनेछ।
सुरु गर्न सजिलो
तपाईंको व्यक्तिगत सम्बद्ध लिंक वितरण गर्नुहोस् वा कमाई सुरू गर्न तपाईंको साइटमा हाम्रो भिडियो च्याट इम्बेड गर्नुहोस्।
सम्बद्ध प्रयोगकर्ताहरूको भुक्तानबाट, कुनै समय सीमा छैन
सम्बद्ध प्रसारकहरू र वेबमास्टर्सको भुक्तानबाट
अनुप्रयोग खोल्नुहोस् पञ्जीकरण लग - इन
फिर्ता लिन सजिलो
VISA, मास्टरकार्ड, Paypal, Payoneer, Yandex, QIWI, SEPA, Bitsafe सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा पैसा फिर्ता लिन एक इनभ्वाइस प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाईं भिडियो च्याटमा कमाएको पैसा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
एक परिचित बजारमा तपाईंको भिडियो च्याट प्रचार गर्नुहोस्
हाम्रो साझेदारहरूको पदोन्नतिको लागि देशहरूको विस्तृत विकल्प छ। अनुप्रयोग मध्य पूर्वी सहित सबै लोकप्रिय भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ।
अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिश, चेक, रूसी, टर्की, जापानी, हिब्रू, अरबी।
रिसीभरको भाषामा सन्देशहरू अटोट्रान्सल्याटिंगले विभिन्न देशहरूबाट आएको ट्राफिकलाई बुझाउनमा कुनै समस्या भएन।
तपाईंको आफ्नै वेबक्याम साइट सुरू गर्नुहोस्
तपाईं हाम्रो साइट मा हाम्रो भिडियो च्याट निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ वा स्क्र्याचबाट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ; कुनै ब्रान्डि needed आवश्यक छैन, केवल तपाईंको सामग्रीको लागि उमेर रेटिंग छान्नुहोस्: १२+, १++, १++ वा १ or+।
सबै प्लेटफर्महरूको लागि उपलब्ध
U LIVE सबै उपकरणहरूमा कुनै पनि ब्राउजरमा काम गर्ने एक अनुकूलन भिडियो च्याट हो। विभिन्न अफरहरू प्रयास गर्न धेरै कम्प्युटरहरू, स्मार्टफोनहरू वा ट्याब्लेटहरूबाट यातायात मिक्स गर्नुहोस्।
गुगल एनालिटिक्स जडान
रूपान्तरण र खरीदहरूको जानकारी प्राप्त गर्न रेफरल द्वारा भ्रमण गरिएका पृष्ठहरूमा गुगल एनालिटिक्स काउन्टर जोड्नुहोस्।
समीक्षा गरेर कमाउनुहोस्
हामी साइटहरूको मालिकसँग सहयोग पुर्‍याउँछौं जसले हाम्रो अनुप्रयोगमा विज्ञापनहरू र लि .्कहरू पोस्ट गर्दछ। हामी जीवन्त र सक्रिय श्रोताहरूको साथ सानो स्रोतको लागि पनि लाभदायक सर्तहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
हामीलाई लेख्नुहोस्: support@ulive.work
हामीले सजीलै सुरू गर्नको लागि हामीले सबै प्रोमो सामग्रीहरू तयारी गरेका छौं। अब तपाइँ आफैले तिनीहरूलाई बनाउनको लागि समय बर्बाद गर्नुपर्दैन। तपाईंलाई आवश्यक प्याकेज डाउनलोड गर्नुहोस् र प्रचार सुरू गर्नुहोस्!
सबै डाउनलोड गर्नुहोस्